ရာသီပြောင်းချိန် ( Henry Aung ) — Aeneas
#myanmar #knowledge #leo #proofofbrain #archon #creativecoin #aeneas #hivelist #hivehustlers
မကြာပါဘူး။ မြန်မာပြည် ရောက်လာလိမ့်မယ်။. !PIZZA. !LUV
@naythan(3/3) gave you | wallet | market | tools | connect | <><
Covid ကာကွယ်ဆေးထိုးပီးရင် မအီမလည်ခံစားရတယ်လို့ ဆရာဝန်တွေ ရှင်းပြထားကြတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ခုချိန်ထိ ဆေးမထိုးနိုင်သေးပါ။ ဖြစ်လာရင်လဲ စောစောသေ ဝဋ်ကျွတ်တာပေါ့။ !LOLZ
အတော်များများကတော့ ရပ်ကွက်မှာ ထိုးပေးကြပါတယ်။ ဒါပေသိ @myimwa တို့ နေရာက အနီရောင် ဒေသ ဖြစ်နေလို့ပါ။. !PIZZA. !LOL. !LUV
ရေတော့ မချိုးပါနဲ့ဗျာ $3 အထက် တက်မှာပါ။
ဒေါ်လာ 30 ဖြစ်ရင်တော့ စိတ်ကြိုက်
မော်ဒန်လေးတွေကို ချေးတွန်းခိုင်းပြီး ရေချိုး။
ခုတော့ဖြင့် Hive ဈေးကတော့ မောင်ကြီးမကယ်နိုင်တယ် ဖြစ်နေပါပြီ လို့။ ! LOL. !PIZZA. !LUV
ဆေးထိုးပြီးလဲ မတ်စ်တပ်၊ လက်ဆေး ဂရုစိုက်ရဦးမှာ ။ အခုဆို အိုမီခရွန် မျိုးကွဲသစ်တောင် ထွက်နေပြီဆိုပဲ။
Mask ကတော့ ဆေးထိုးပြီးလည်း ချွတ်လို့ မဖြစ်ဘူး... ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။ !PIZZA. !LUV. !LOL
မန်းလေးမြို့မှာတော့ Mask တက်ရင်ဖမ်းတယ်တဲ့ဗျ။
ကျနော်တော့ မထိုးဘူး။ ဪ အရင်အချိန်တုန်းကများဆိုလျင် နိုဂ်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေက ထိုးရန် အဆင့်3မှာရှိတယ်။ ခုတော့..ထိုးလည်းမထိုးချင်လို့ပါ။
ခုချိန်လောက်ဆို တနိုင်ငံလုံး ဆေးထိုးပြီးလို့ သာသာ ယာယာ ဖြစ်နေလောက်ပြီ။ တွေးမိတိုင်း အရိုးထိအောင်နာတယ်ဆိုတာ.... ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေ... !PIZZA. !LUV. !LOL
ဟိုမှာ ဘာဆေးထိုးကြလဲမသိဘူး။ ကာကွယ်ဆေးတော့ ထိုးထားသင့်လို့ ဒီမှာတော့ ရလွယ်တဲ့ စီနိုဖန်ပဲ ထိုးထားပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ ထိုးတဲ့ ဆေးရုံမှာတော့ ဆီနိုဖန်း / ဆီနိုဗက် ရွေးလို့ရတယ်။ ကိုယ်တွေလည်း ကာကွယ်ဆေး သာထိုးရတာ။ စိတ်သန့် သွားအောင်လို့။. !PIZZA. !LOL. !LUV
ဆေးထိုးထားလဲ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း မက်စ်တပ်ဖို့တော့ မမေ့နဲ့နော် !LOLZ !PIZZA
Mask ကတော့ ဆေးထိုးပြီးလည်း ချွတ်လို့ မဖြစ်ဘူး... ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။ !PIZZA. !LUV
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင် အဲ့လို မအီမသာ ဖြစ်တတ်တယ် ပြောတယ် ဗျ။
ဟုတ်တယ်... Covid အသေးစားလေး ပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့။. !PIZZA. !LOL. !LUV
ဆေးထိုးထိုးပြီးချင်းနေ့တော့ ရေမချိုးရဘူးနော်။Hive 3$ တက်လို့ ရေသွားချိုးနေမှ ဟုတ်ပဖြစ်နေအုံးမယ်။ အခုဖြစ်တာက ရာသီအကူး ဆောင်းအအေးဓာတ်ကြောင့် ဖြစ်မှာပါ။ !PIZZA
အမှန်က ကာကွယ်ဆေးက ပူလို့ အရက် ဘီယာ ရှောင်ခိုင်း တာပဲ ရှိတယ်။ ရေကတော့ ချိုးလို့ရပါတယ်။. !PIZZA. !LOL. !LUV
@kachinhenry(9/18) tipped @naythan (x1)
တော်တော်ဆိုးတဲ့ Covid ပါပဲ။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းစာအုပ်မှာ
နောင်လာနောက်သားတွေ သူ့အကြောင်းကို စာအုပ်ထူကြီးနဲ့ သင်ကြရတော့မည် ထင်ပေါ့